ऋतु कँडेलको ‘कहाँ हो तिम्रो मावल?’ गायिका ऋतु कँडेलले ‘कहाँ हो तिम्रो मावल?’ बोलको रोइला भाकाको गीत ल्याएकी छन्।
मनुस्मृतिमा के छ ? मनुस्मृति सही वा गलत भनेर निर्क्योलमा पुग्नुपूर्व यसको रचनापद्धति र विभिन्न कालखण्डको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
मूर्ति: अमेरिकाबाट फर्काउन सकिने‚ छिमेकी टोलबाट नसकिने! ४३ वर्षअगाडि चोरी भएर अमेरिका पुगेको पार्वतीको मूर्ति फर्काएर वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरिंदै छ। तर, छिमेकी टोलको पुरातात्त्विक महत्त्वको उड्ने सिंहको मूर्तिलाई भने ८८ वर्ष पहिले राखिएको ढुङ्गेधाराबाट झिकेर यथास्थानमा राख्न दिइएको छैन।
‘लाहुरेमा पनि प्रेम र आँसु हुन्छ भन्ने नै सिकाइएन’ लाहुरेमा पनि प्रेम र आँसु हुन्छ भन्ने कुरा नसिकाउँदा उनीहरूले आफ्नो पीडा बाहिर ल्याउन नपाएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
भारतीय चर्चित गायक केकेको निधन भारतको कोलकातामा गीत गाउँदागाउँदै असहज महसूस गरेका चर्चित गायक केकेको निधन भएको छ।
भक्तपुरको पार्वतीको मूर्ति अमेरिकाबाट फिर्ता आउने अमेरिकाको येल विश्वविद्यालय आर्ट ग्यालरीको स्थायी संग्रहमा रहेको भक्तपुरको गोलमाडीस्थित वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरको पार्वती (तारा)को प्रस्तर मूर्ति फिर्ता आउने भएको छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हवन बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी परिसरमा हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख नै नभएको रुम्मिनदेईको नाममा हिन्दू परम्परा अनुसार हवन गरिनु झट्ट हेर्दा केही व्यक्तिको लहडबाजी देखिन्छ। तर, यो लहडबाजी मात्रै होइन‚ गम्भीर र संवेदनशील विषय हो।
दरबारमार्ग महोत्सवको तयारी पूरा काठमाडौंको दरबारमार्गमा आयोजना हुने १५औं दरबारमार्ग महोत्सवको तयारी पूरा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।
बिस्केटमय भक्तपुर जात्रा तथा पर्वमा रमाइरहने भक्तपुर यति वेला भने बिस्केट जात्राको उल्लासमा छ।
तस्वीरमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रामा प्रारम्भ भएको छ।